Wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi Cabdi, ayaa sheegay inaanay Soomaaliya xaq u lahayn inay soo farogeliso arrimaha Somaliland, waxaanu sheegay in Somaliland tahay qaran ka madaxbanaan Soomaaliya. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa Madaxweynaha JSL...
Wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi Cabdi, ayaa sheegay inaanay Soomaaliya xaq u lahayn inay soo farogeliso arrimaha Somaliland, waxaanu sheegay in Somaliland tahay qaran ka madaxbanaan Soomaaliya.
Madaxweynaha JSL Muuse Biixi Cabdi Cabdi, ayaa sheegay inaanay Soomaaliya xaq u lahayn inay soo farogeliso arrimaha Somaliland, waxaanu sheegay in Somaliland tahay qaran ka madaxbanaan Soomaaliya.
Madaxweyne Biixi oo la weydiiyay xidhiidhka isbedelay ee Itoobiya iyo Ereteriya iyo suurtogalnimada tartan ay dekedda Berbera la galaan dekedaha Ereteriya ee Casab iyo Musawac oo la filayo in Itoobiya isticmaasho, wuxuu sheegay in xidhiidhka
wanaagsanaadanay ee Itoobiya iyo Ereteriya uu u arko talaabo wanaagsan, “Waxaanu u aragnaa talaabo togan.” Ayuu yidhi Madaxweynuhu isagoo raaciyay, “Itoobiya waxay badeecadaheedu u baahantahay in ka badan 10 dekeadood.” Ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.
Previous articleDaawo Qaar kamida dadwaynaha Berbera oo ka hadlay dhagax dhigii dekada cusub ee dp world dhisayso
Next articleWasiirkii Hore Ee Ganacsiga Iyo Warshadaha Somaliland Ahmed Cali Ubaxle ayaa waraysi ay layeelataya shabakada Hadhwanaagnews kaga hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin isbedelka geeska Afrika iyo siyaasada Somaliland.